Safari 10 dia mitondra fanitarana vaovao ho an'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny taon-dasa ny asa miaraka amin'ny mpanakana ny atiny tranonkala, fantatray fa ny Apple Safari 10 vaovao dia hamela malalaka isan-karazany ny fanitarana kaody teratany hahafahan'ireo mpampiasa mahazo sy manavao azy ho azy amin'ny alàlan'ny Mac App Store, izay hanatsara ny fahombiazana, ny filaminana ary ny fahatokisana ny motera fikarohana.
Tamin'ny taona 2014 dia nanolotra i Apple App Extensions, maritrano vaovao ho fampivelarana ireo singa fampiharana ao amin'ny iOS sy macOS toy ny safidy ho an'ny mizara atiny amin'ny tambajotra sosialy, fanohanana ny widgets sy keyboard ho an'ny iOS. Tamin'ny 2015, ireo an'ny Cupertino dia nanolotra ny mpanakana ny atiny fa hanana ny fahaizany izy ireo sorohy ny fampidinana tsy ilaina, popup ary singa fitetezana hafa.
Fanitarana teratany ao amin'ny Safari 10
Ny mampiavaka ny fanitarana Safari 10 amin'ireo taloha dia ireo vaovao afaka miresaka soa aman-tsara amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana zaraina. Etsy ankilany, ny maritrano vaovao hahafahan'ny mpamorona manangana zarao ho toy ny ampahany amin'ilay fampiharana ny fanitarana anao amin'ny alàlan'ny App Store fa tsy plugins misaraka.
Ho an'ny mpamorona, afindra ny extensions-nao efa noforonina tamin'ny fampiharana teratany App Extensions dia ho tena tsotra amin'ny alàlan'ny Xcode. Io fanovana io dia hahafahan'ny mpampiasa App Extensions fanavaozana mifanitsy amin'ny fanitarana, izay hisorohana ny olana mifanentana.
Ny fahaizana mamorona rindranasa amin'ny kaody zanatany dia hamela ny fampiharana App Extensions hiasa haingana sy mahomby kokoa, mampihena ny fanjifana harena.
Safari 10 dia hanana fanohanana ihany koa Fandidiana Apple Pay, fisarahana mizara amin'ny iPad, horonan-tsary HTML 5 natsofoka tamin'ny Mac, ary fampiasana mandeha ho azy ny Horonan-tsary HTML5 amin'ny tranokala mitaky ny fampiasana Adobe Flash na Microsoft Silverlight.
Miaraka amin'ity maritrano vaovao ity dia afaka manitatra ny fahafahan'ny fampiharana sy ny azy ireo ny mpamorona rafitra fiasa, iOS ary macOS Sierra. Misy karazany maro ny fanitarana an'ny antoko fahatelo azo ampifanarahana amin'ny rindranasa toa ny Sarintany, fampandrenesana, lahatahiry antso ary Siri.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fanitarana Safari 10 vaovao ho an'ny iOS 10 sy macOS Sierra
Apple dia te hanampy ireo artista ho takalon'ny exclusives
Aza tsindrio ny bokotra mena, tonga amin'ny Mac App Store